Portable Induction Brazing Units-HLQ Soo-saare
Bogga ugu weyn / Heer-qabatada Indhasharada gacanta / Qaybaha Indha-indheynta La qaadan karo
Qaybaha Kala-soocista ah ee la dhigan karo
Category: Heer-qabatada Indhasharada gacanta Tags: unugyada fareebka ah ee la qaadan karo, xoog yaraanta foosha la qaadan karo, kuleyliyaha la qaadan karo ee kululeeya kululeeyaha, Mashiinka xoog ku muquuninta la-qaadan karo ee la qaadan karo, Nidaamka xoog ku muquuninta dhalinta ee la qaadan karo, kuleyliyaha la qaadan karo kuleylka, kuleyliyaha la qaadan karo kuleylka, unugyada la-qabsashada la qaadan karo
Cutubyada Xannibaadda La-qaadan Karo ee La qaadan Karo
danab Input Hal mar, 220V, 50-60HZ
Power Output 4.5KW
Joogitaanka Oscillate 1100-2000KHz
Input hadda 5-20A
size Main 330X310X155mm
Iyadoo si joogta ah u socota 1100-2000KHz miisaanka qulqulka ayaa lagu xakameyn karaa xaddiga 1mm, iyo qaybo aad u khafiif ah oo yar ayaa si sahlan loogu kulmi karaa.
IGBT iyo teknooloojiyada casriga ah ee hadda la isticmaalay; kalsooni sarreeya iyo kharashka dayactirka oo hooseeya.
100% wareega shaqada, shaqeyn joogto ah ayaa loo ogolyahay soo saarka ugu badan ee korontada.
Xaaladda joogtada ah ama awood joogto ah ayaa loo dooran karaa si waafaqsan si loo gaaro waxtarka kuleylka;
Muujinta awoodda kuleylka iyo kuleylka kuleylka iyo kuleylka.
Si fudud loo rakibo, rakibidda waxaa sameeya qof aan xirfadlaha aheyn si fudud;
Miisaanka fudud, cabbirka yar;
Faa'iidooyinka nooca leh waqtiga: saacadaha korontada iyo xilliga kuleylka wakhtiga kuleylka iyo wakhtiga xajinta ayaa loo kala hormarin karaa, si loo ogaado qalabka kuleylka fudud, qaabkani waxaa lagu soo jeedinayaa inuu isticmaalo wax soo saarka si loo hagaajiyo soo celinta.
Daaweynta kuleylka ee qalabka iyo mashiinka.
Kuleylka dhagax ka yar 1mm
Barafku wuxuu u yaallaa jimicsi ama cilmi baaris jaamacadeed iyo wixii la mid ah.
Kuleylka qolofka xabadda
Barafka oo dhalaalaya biyo waa la qaboojiyey
Sameynta silig si joogto ah
model Awoodda Awooda Awooda Joogitaanka Oscillate Awooda Oscillate Max Wareegga shaqada Rabitaan biyo ah
Kuleyliye yar-yar gacanta ku haya
Qalabka kululeeyaha yar-yar ee kululeeyaha
Cadaadiska Gacan-qabadka ee Qaboojiyaha
Qaboojiyaha kuleyliyaha indhaha 6KW